ပေတရု-ခေါ်တော်မူခြင်းခံ၊ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ပြောင်းလဲသည်။ | Peter – Called, Convicted and Converted | Real Conversion
PETER - CALLED, CONVICTED AND CONVERTED
ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၁၄ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
Lord’s Day Morning, February 14, 2016
“တဖန်သခင်ဘုရားက၊ ရှိမုန်၊ ရှိမုန် ဂျုံဆန်ကို ဆန်ခါနှင့်ချသကဲ့သို့ စာ တန်သည် သင်တို့ကို ချရမည်အကြောင်း အခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍၊ သင်၏ယုံကြည်သောစိတ်မပျက်စေခြင်းငှါ ငါသည် သင့်အဖို့ဆုတောင်း လေပြီ။ သင်သည် သတိရပြန်သောအခါ သင်၏ညီအစ်ကိုတို့ကို တည် ကြည်စေလော့ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်။” ( ( လုကာ ၂၂း ၃၁-၃၂ ))
ပေတရုပြောင်းလဲသည့်အချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားဟောဆရာဖျမ်းမျှကို မေးမြန်း ကြည့်ပါ။ ဆက်လက်ပြီးလုပ်ဆောင်ပါ။ အားလုံးလိုလိုက ပေတရုသည် နောက်တော်သို့ လိုက် ရန် ခရစ်တော်ခေါ်တော်မူသည့်အချိန်တွင် ပြောင်းလဲသည်ဟုသာ ဆိုကြပေမည်။ (မဿဲ ၄း ၁၉ ) လူနည်းစုကသာလျှင် ပေတရုသည် “သင်သည် အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်၏သား တော် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်” ဟုပြောဆိုသဖြင့် ယေရှုက”ဇာတိနှင့်အသွေးအသားသည် ဖော်ပြထားမည်မဟုတ်၊ ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိသောခမည်တော်ကသာလျှင် ဖော်ပြသည်” ဟု ဆိုသောအချိန်တွင် ပြောင်းလဲခြင်းရသည်ဟု ဆို ကောင်းဆိုနိုင်ကြမည်။ ( မဿဲ ၁၆း ၁၆၊ ၁၇) သို့သော် ထိုအထဲက မည်သည့်သာဓကကမျှ ပေတရု၏ပြောင်းလဲခြင်းကို ပြသထားခြင်း မရှိပါ။ ပေတရုသည် ယေရုှ၏နောက်တော်သို့လိုက်ခြင်းအားဖြင့်သာပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင် ကယ်တင်ခြင်းဟူသည် ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်ဟူသော သဘောရှိလာပေမည်။ ထို့ ကြောင့် ၄င်းသည် ပေတရု၏ပြောင်းလဲခြင်းမဖြစ်နိူင်ပါ။ ပေတရုက ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ၏သားတော် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း ၀န်ခံပြောဆိုသောအချိန်တွင် ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင် ခံယူချက်ယုံကြည်ခြင်း၊ အလင်းပေးခြင်း အားဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း မဖြစ်နိူင်ပါ။ ပေတရုအား အဘယ်အရာဖော်ပြထားသည်ကို နတ်ဆိုးပင်သိတော်မူသည်။ အ ကြောင်းမူကား “နတ်ဆိုးတို့လည်း၊ ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင် ၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ဟစ်ကြော်လျက် လူများမှထွက်သွားကြ၏။ ကိုယ်တော် သည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့သိကြသောကြောင့်၊ စကားတခွန်းကိုမျှမပြောစေခြင်း ငှါ မြစ်တားတော်မူ၏။”( လုကာ ၄း ၄၁) ထို့ကြောင့် ပေတရု၏နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် နတ်ဆိုးထက်ပင် မပိုပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သေချာစွာလေ့လာသင်ယူပြီးမှ ပေတရုသည် ပြောင်း လဲတော်မမူကြောင်းကို၀န်ခံခဲ့သည်။ သူသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရန် ကြိုး စားအားထုတ်နေသောသူဖြစ်တော်မူသည်။
ပေတရုအသက်တာအားဖြင့် သာဓကတစ်ခု ကျွနု်ပ်တို့ရရှိကြပါသည်။ ယနေခေတ် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် ပေတရုကဲ့သို့ပင် လှည့်ပတ်သွားလာနေကြသည်။ ယေရှုနောက်သို့လိုက်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသည်။ ယေရှုသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်တော်မူကြောင်း သိသောစိတ်ရှိကြသည်။ သို့သော် ရှင်ပြန် ထမြောက်ရာနေ့မတိုင်မှီ ပေတရုထက် ပို၍ပြောင်းလဲကြသည်ဟူ၍ မဆိုနိူင်ပေ။ တရားဟော ဆရာများပင်လျှင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြပါ။ ခရစ်တော်၏နောက်တော်သို့လိုက်ရန် ကြိုးစား အားထုတ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်၏နောက်တော်သို့ လိုက်ရန် ကြိုးစားအား ထုတ် ကြသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို သိကြသည်။ သို့သော် သူတို့ သည် စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းတရားကို ရရှိရန်မူ မျက်ကန်းသဖွယ်ဖြစ်လျက်နေကြသေး သည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ယနေ့ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းနည်းပါးမှု၏အကြောင်း တရားတစ်ခုဖြစ်မည်ဟု ထင်မိသည်။ သင်းအုပ်အများစုသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာအသက် ရှင်ပုံရှင်နည်းအကြောင်းကို မယုံကြည်သူများအားဟောကြားသွန်သင်ပေးရန်ကြိုးစားအား ထုတ်မှုတွင် အချိန်ကို ဖြုန်းနေသလိုမျိုးဖြစ်ကြသည်။ “အပြစ်ထဲတွင်သေလျက်ရှိသော” လူ တစ်ဦးသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် အဘယ်သို့အသက်ရှင်နိူင်မည်နည်း။(ဧဖက် ၂း ၁၊ ၅)
တရားဟောဆရာများစွာတို့သည် ၄င်းတို့၏လူများအား ဧဝံဂေလိတရားဟောကြား ရန် ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသောအသင်းတော်တစ်ခုတွင် ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားဖို့အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသည်။ ယင်းသည် မိခင်များနေ့ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် နူးညံ့ သိမ်မွေ့သောတရားဒေသနာကို ဟောပြောမည်ဟု ထင်မိသည်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူကိုမျှမ ရှုတ်ချရဲပါ။ အကြောင်းမှာ ကျွနု်ပ်သည် အသင်းတော်တွင် ဧည့်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ပေ တည်း။ ကျွနု်ပ်သည် မိခင်ဖြစ်သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သက်သေခံမည် ဟု မျှော်လင့်မိသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ၁၂ သို့မဟုတ် ၁၅ မိနစ်မျှသာပြောဆိုခွင့်ရပါသည်။ ကျွနု်ပ် က ဧည့်ပရိတ်သတ်များအား ကျွနု်ပ်မိခင်က ယေရှုကို ကိုးစားယုံကြည်ပြီးပြောင်းလဲလာသည် အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့သည်။ ပရိတ်သတ်များ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငရဲအ ကြောင်းကို နာရီးနှစ်ချက်ကြာမျှ ဟောကြားမည်ဟု သင် ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သင်းအုပ် နှင့်သူ၏ဇနီးသည်တို့သည် ကျွနု်ပ်အားနှုတ်မဆက်ဘဲ ဘုရားကျောင်းမှ ပြန်လည်ထွက်ပြေး သွားကြသည်။ အသင်းတော်ရှိလူများက မတ်တပ်ရပ်ပြီး သူတို့မသိနားမလည်ဘူးသောခံယူ ချက်အသစ်ကိုဟောပြောသကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်နှင့်ဇနီးသည်အား စေ့စေ့ကြည့်နေကြသည်။ နောက် ဆုံးတွင် အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးသည် အနားသို့ချဉ်းလာပြီး လက်ကိုနှုတ် ဆက်လာသည်။ သူမက ပြုံးလျက်သားပြောသည်မှာ “အံ့သြစရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာပဲ၊ ထိုသို့သောတရားဒေသနာမျိုးကိုမကြားရသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပြီ”ဟု ဆိုလာ သည်။ ဒါက တရားဒေသနာလုံးဝမဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်မိခင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၂ သို့ မဟုတ် ၁၃ မိနစ် သက်သေခံချက်သာဖြစ်သည်။
“အမှန်တကယ်ပဲ ထိုသို့သောဆိုးရွားမှုသည်ဖြစ်နိူင်ပါသလား” ဟု တွေးရင်း ဇနီး သည်နှင့် ကျွနု်ပ်သည် ကားကို မောင်းထွက်သွားကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် တောင်ပိုင်းအချက် အချာကျသောနေရာတွင် ရှိနေကြသည်။ ကိုယ့်အားကိုကိုး ဖန်တမင်တယ်နှစ်ခြင်းအသင်း တော်ပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ရိုးစင်းသောမိခင်၏ပြောင်းလဲခြင်းသက်သေခံချက်၏”မှုတ် ”ထုတ်ခြင်းကိုခံရကြသည်။
အခြားဖန်တမင်တယ်နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းတွင် ကျွနု်ပ်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း ပြီး တရားဒေသနာကို တိုတိုတုတ်တုတ်ဟောပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် အသက်ကြီးသော မိန်း မကြီးက ဇနီးသည်အား သူမ၏အသက်ကြီးသောခင်ပွန်းကို ခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်နိူင်လျှင် အလွန်ပင်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။ ဇနီးသည်က သူ၏ခင်ပွန်းသည်ကို ခရစ် တော်ထံသို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးရန် မိမိ၏သင်းအုပ်ဆရာကို တောင်းဆိုသင့်ကြောင်း အကြံ ပေးထားသည်။ မိန်းမကြီးက “သူလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။သူ့ကို တောင်းဆိုတာ အကြိမ်ပေါင်းများ စွာရှိနေပြီ။ ကျွနု်ပ်ခင်ပွန်းသည်အား ပြောင်းပြန်လှန်နိူင်ဖို့ သူကြောက်ရွံ့နေသည်နှင့်တူပါ သည်” ဟု ပြန်၍ ပြောလိုက်သည်။
ထိုသို့ဆိုးသွင်းသောအရာသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါရဲ့လား ၊ ဒေါက်တာ Hymers? အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဟုထင် ရသည့်သင်းအုပ်များပင်လျှင် ဟိုလှည့်ဒီပတ်၊ နှုတ်ဖြင့်စကားသာမွတ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲတွင် အလေးအနက်ထားခြင်းမရှိ။ စိတ်ခံစားချက်မရှိ။သနားညှာတာစိတ်မရှိ။ တနင်္ဂနွေနေ့နံနက် တွင်လည်း နာရီးတစ်ချက်ခွဲသာ ၀တ်ပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ဧဝံဂေလိသင်းအုပ်ဆရာ ရာခိုင်နှုန်းက ထက်ဝတ်မျှသေလျက်နေသောအပိစ်ကော်ပယ်ယဇ်ပရောဟိတ်များကဲ့သို့ဖြစ် ကြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့နှစ်ခြင်းသင်းအုပ်များသည်လည်း မသာပါ။ လူတို့သည် မျက်စိကိုမှိတ် ထားကြပြီး “ရှင်းပြ” တရားဒေသနာဟောပြောနေစဉ်တွင် အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်။ သူတို့ သည် လူငယ်များအား စိတ်ခေါ်မှုကိုပေးသည်မဟုတ်။ ပျောက်ဆုံးသူများအား မျှော်လင့်ချက် ကိုလည်း ပေးမထားပါ။ ထိုသို့သော သင်းအုပ်များသည် ပြတိုက်ကိုစောင့်ထိန်းသူများထက် မသာသောသူများပင်ဖြစ်ပါသည်။ သုဘရာဇာထက်ပင် မသာပေ။ ဘုရားသခင် ကူညီမစမူပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏အသင်းတော်များသည် သေခါနီးနီးအသင်းတော်များမဟုတ်ပါ။ သေလျက်ရှိပြီး သောအသင်းတော်များပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ အသွေးနီးစွန်းသောဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို အ ဘယ်သူဟောပြောပါသနည်း။ “သင်သည် ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမည်” ဟု အဘယ်သူ ဟစ်ကြော် သနည်း။ ကားတိုင်တော်တရားနှင့် အပြစ်သားတို့၏ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သတင်းစကားအတွက် အဘယ်သူရပ်တည်နိူင်သနည်း။ အသင်းတော်၌ရှိကြသော လူလတ် ပိုင်းအမျိုးသမီးများသည် ထိုအရာကို နှစ်သက်သဘောကြလိမ့်မည်မဟုတ်။ ထိုအမျိုးသမီးများ ကို ပြစ်တင်ရှုပ်ချစရာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့၏လူငယ်များသည် ကြွက်များမြစ်ရေထဲ သို့ ခုန်ဆင်းထွက်ပြေးကြသကဲ့သို့ အသင်းတော်မှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြပါသည်။
ခေတ်ဟောင်းပုံစံ ဧဝံဂေလိတရား တရားဒေသနာမရှိဘဲ ကျွနု်ပ်တို့၏အသင်းတော် သည် လူမျိုးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိမြင်နိူင်သည်။ ကျွနု်ပ် တို့၏အသင်းတော်သည် ကောလိပ်ကောင်းသားအရွယ် လူငယ်များသာဖြစ်ပါသည်။ အပြစ် အကြောင်း၊ ငရဲအကြောင်းကို ဟောပြောသောအခါ စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းသည် တနင်္ဂ နွေနေ့တိုင်းတွင် တွေ့မြင်ရသည်။ လောကသားများကို ညှို့ယူဖမ်းစားသည်။ ထိုသို့သောအ ကြောင်းကို သူတို့သည် တခါတလေပင် မကြားဘူးကြပေ။ သူတို့ကြားထဲက များစွာသောသူ တို့သည် ပြောင်းလဲလာကြသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်က ခရစ်ယာန်မဟုတ်သည့်အသိုင်းအ ၀ုိင်းထဲက လူငယ်ခုနှစ်ဦး၏ပြောင်းလဲခြင်းကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့သင်ယူလေ့လာနိူင် သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ရှိသည့် ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကို သင်ယူ လေ့လာထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို ယနေ့နံနက်တွင် ကျွနု်ပ်ဟောပြောလို သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ရှိမုန်ပေတရု၏ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကို လေ့လာကြရမည်။ ပေတရု သည် အချိန်ကာလတိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးသောခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာ ပါသည်။ သူသည် အဘယ်သို့ပြောင်းလဲလာပါသနည်း။ သူသည် မည်ကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်တစ် ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သနည်း။
၁။	ပထမအချက်၊ ပေတရုသည် ခေါ်ခြင်းခံရသည်။
“ဂါလိလဲအိုင်နားမှာ ကြွတော်မူစဉ်၊ ပေတရုဟုခေါ်ဝေါ်သော ရှိမုန် နှင့်အန္ဒြေ၊ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်တို့သည် တံငါဖြစ်၍၊ အိုင်တွင် ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကို မြင်တော်မူလျှင်၊ ထိုသူတို့အား ငါ့နောက် သို့လိုက်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကိုမျှားသောတံငါဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါပြုမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိလေသော်၊ ထိုသူတို့သည် ချက်ချင်းပိုက် ကွန်ကိုစွန့်ပစ်၍၊ နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။” ( (မဿဲ ၄း ၁၈- ၂၀) )
အလွန်ပဲ လွယ်ကူလှပါသည်။ သို့မဟုတ် ထိုသို့သော သဘောရှိသည်။ သူတို့သည် ပိုက်ကွန် ကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး ခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်ကြသည်။ ပေတရုအတွက် အဘယ့်ကြောင့် လွယ် ကူလှပါသနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။
“တန်ခိုးတော်ပြသောနေ့ရက်ကာလ၌၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် သန့်ရှင်းသောတန်ဆာကိုဆင်လျက်၊ ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ် ရှိ၍၊” ( (ဆာလံ ၁၁၀း ၃ ) )
ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ဖို့ ဘုရားသခင်ရွေးနှုတ်ထားသောသူများသည် ပေတရုကဲ့သို့ ပင် ပထမခြေလှမ်းကို လှမ်းလိုကြပါသည်။
ကျွနူ်ပ်က ဤစာကြောင်းကိုရေးသားသည့်အချိန်တွင် ဇနီးသည်က ကာအေ့ချ်မှ ပို့ကဒ် ကို ယူလာခဲ့သည်။ ချက်ချက်သတိပြုမိသည်။ ပထမအသင်းတော် Huntington ပန်းခြံမှ ဓါတ် ပုံတစ်ခုရှိသည်။ ၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုသော စာပို့အမှတ်အသားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်သည် မပြောင်းလဲသေးသည့် အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ ထိုကဒ်သည် ဆန်းဒေးစကူးစူ ပါအင်တင်းတက် မစ္စ Bocker ထံကဖြစ်သည်။ သူမက ဤသို့ရေးသားသည်။
သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏လူများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ နေကောင်းကျန်းမာ မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။သင့်ကို သတိရလွမ်းပါ၏။ အခြားအ ရပ်တွင် မည်သို့သောအကြောင်းတရားကြောင့် ရှိနေပါစေ၊ ကျေး ဇူးပြုပြီး ပြန်လာပါ။
ထိုမိန်းမကောင်းတစ်ယောက်သည် ထိုအသင်းတော်သို့ပြန်သွားရန် ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာဖြစ်သည်။ သို့သော် ကဒ်ထက်တွင်ပါသောရက်စွဲကို သတိပြုမိသည်။ လအနည်းငယ်ကြာလာသောအခါ ကျွနု်ပ်အား အသင်းတော်အပြင်တွင် ထိန်း သိမ်းနိူင်သောအရာမရှိတော့ပါ။ ထိုလအနည်းငယ်အတွင်းအဘယ်သို့ဖြစ်လာသနည်း။ ထိ ရောက်သည့်ခေါ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်က ခေါ်တော်မူကြောင်းကို ပြောလာနိူင်သည်။ တန်ခိုး တော်ပြသောနေ့ရက်ာလတွင် ဖန်ဆင်းတော်မူသည်။
ဘုရားသခင်က ခေါ်သောအခါ ကျွနု်ပ်အား အသင်းတော်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် မစ္စ Bocker သို့မဟုတ် အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ကြိုးစားအားထုတ်ရန် မလိုပေ။ ဘုရားသခင် ၏တန်ခိုးတော်က ဆွဲခေါ်သောအခါ မည်သူမျှ ဟန့်တားမရနိူင်တော့ပါ။
ပေတရုသည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် မပြောင်းလဲသေးပါ။ မစ္စ Bocker က ကဒ်ပို့သည့်အချိန်တွင် ငါလည်း မပြောင်းလဲသေးပါ။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးက လုပ်ဆောင်စေလိုသည်။ ပေတရုကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်ကဲ့ သို့ပင် ပျောက်ဆုံးနေသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ယေရှု၏နောက်တော်သို့လိုက်စေလိုကြ သည်။ ထို့အပြင် ပေတရုသည် ငါးဖမ်းသောပိုက်ကွန်ကို ချစ်ချင်းထားရစ်ခဲ့ပြီး ယေရှု၏နောက် တော်သို့ လိုက်လေသည်။ သို့သော် သူသည် ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟု မဆိုလိုသေးပါ။
ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်ကိုခေါ်ဆောင်လာသော လူငယ်များ လျှင်မြန်စွာရောက်ရှိလာ ရသည့်အကြောင်းအတွက် အံ့သြမိပါရဲ့လား။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်က ဆွဲခေါ်သော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူတို့သည် ပြောင်းလဲလာကြသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ယေရှုက “ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိသော်လည်း ရွေးကောက်သောသူနည်း၏” ဟုဆိုပါသည်။ (မ ဿဲ ၂၀း ၁၆၊ ၂၂း ၁၄ ) ဘုရားသခင်က လူများစွာကို ခေါ်ထားပါသည်။ သူသည် ယနေ့နံနက် တွင် သင့်အား ခေါ်တော်မူသည်။ သင်၏နာမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ကျွနု်ပ်တို့အား ပေးထားခဲ့ သည်။ ထို့ကြောင့် ကားကိုစေလွှတ်ပြီး ခေါ်ထားရပါသည်။ သင့်အား ခေါ်ထားသကဲ့သို့ “ခေါ် တော်မူသောသူအများရှိကြသည်။” “သို့သော် ရွေးကောက်သောသူနည်းကြသည်။” ဒါကိုလုံးဝ နားမလည်ပါ။ သို့သော် အတွေ့အကြုံများစွာဖြင့် နားလည်လာရသည်။ သင်သည် ဘုရားသ ခင်ရွေးချယ်ထားသောသူဖြစ်နေလျှင် ပြန်လည်ဆွဲခေါ်တော်မူမည်။ သင့်ကို စောင့်ထိန်းမည်။ သင်ပြောင်းလဲလာသည်အထိ စောင်မမူမည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသော သူမဟုတ်လျှင် ဘုရားကျောင်းကို အနှေးနှင့်အမြန် စွန့်ခွါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား “ခေါ် တော်မူသောသူအများရှိသော်လည်း ရွေးကောက်သောသူနည်း၏။”
(“ကျေးဇူးတော်! နှစ်လိုဖွယ်သောအသံ” ၊ Philip Doddridge, ၁၇၀၂-၁၇၅၁၊
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ပေတရုသည် အပြစ်ကိုသိမြင်လာသည်။
ကျွနု်ပ်က ပေတရုသည် ခရစ်တော်၏နောက်တော်သို့လိုက်သည့် သုံးနှစ်ကို ချန်လှစ် ထားခဲ့သည်။ ပေတရုသည် ထိုသုံးနှစ်အတွင်း အတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာကို ရရှိခဲ့သည်။ သို့ သော် သူ၏အသက်တာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည့် တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ ယေရှုသည် အဘယ်သူဖြစ်ကြောင်း သူ၏ဝန်ခံချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ တရားဒေသနာ၏အစပိုင်း တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီ။ ပေတရုက “သင်သည် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ယေရှုက “လူအသွေးအသားအားဖြင့် သိရသည်မဟုတ်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော် မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဖော်ပြတော်မူသည်” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ( မဿဲ ၁၆း ၁၆၊ ၁၇)
ထိုအမှုအရာကို “အလင်းပေးခြင်း” ဟု ခေါ်သည်။ ၄င်းသည် ပြောင်းလဲခြင်းမတိုင်မှီ၊ ပြောင်းလဲခြင်းအတွင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်နိူင်ပါသည်။ ပေတရု၏အသက်တာ တွင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိမှီတွင် ခရစ်တော်သည် အဘယ်သူဖြစ်သည်အကြောင်း သမ္မာတရားကို ဘုရားသခင်က သိစေခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်အသက်တာတွင်လည်း ဖြစ်ပျက်သောအရာပင်ဖြစ် သည်။ ကျွနု်ပ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတွင် ခရစ်တော်ကို လူကောင်းတစ်ဦး၊ ရန်သူ များက ကြိုးပေးသတ်ကြသည့်သူ ဟုသာ သိခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်မပြောင်းလဲခင်ရက်အနည်းငယ် တွင် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်အား ယေရှုသည် လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို ထင်ရှားစေသည်။ ထိုအမှုအရာသည် Charles Wesley ၏ ဓမ္မသီချင်းဖြစ်သည့် “အံ့ဘွယ်မေ တ္တာ၊ မည်သို့ဖြစ်နည်း၊ ကျွနု်ပ်ဘုရား ကျွနု်ပ်အတွက်သေခံ” သီချင်းသီဆိုနေစဉ်အတွင်း ဖြစ် လာခဲ့သည်။ မပြောင်းလဲသေးသော်လည်း ထိုတေးသီချင်းသည် ကျွနု်ပ်၏စိတ်နှလုံးကို အလင်းပေးတော်မူခဲ့သည်။ ပေတရုသည်လည်း မပြောင်းလဲခင်ပင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လုကာ ၁၈း ၃၁-၃၄ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ၄င်းတွင် ပေတရုနှင့်အခြားတပည့်တော်များ သည်လည်း မပြောင်းလဲသေးကြကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တကျိပ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကို ခေါ်၍၊ ငါတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ ပရောဖက်များရေးမှတ်သမျှသည် လူသား၌ပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ တ ပါးအမျိုးသားတို့လက်သို့အပ်နှံခြင်း၊ ပြက်ယယ်ပြုခြင်း၊ညှင်းဆဲ ခြင်း၊ တံထွေးနှင့်ထွေးခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။သူတို့သည် လူသားကို ရိုတ်ပုတ်၍ သတ်ကြလိမ့်မည်။ သုံးရက် မြောက်သောနေ့၌ ထ မြောက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုစကား တော်တစ်ခွန်းကိုမျှ တပည့်တော်တို့သည် နားမလည်ကြ။ ထိုအ ကြောင်းအရာသည် ၀ှက်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ မိန့်တော်မူချက်အနက်ကို မရိပ်မိ ကြ။” ( (လုကာ ၁၈း ၃၃-၃၄ ) )
ဤသည်မှာ ဧဝံဂေလိအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပေတရုနှင့်အခြားသူများအား ယေရှုရှင်းပြ သည့် တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ရိုက်နှက်ကြသည်။ သေသည်အထိ ရိုက်ကြမည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူလိမ့်မည်။ ထိုအရာ သည် ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အခြေခံကျသောတရားဖြစ်သည်။ ထိုအ ကြောင်းကို ၁ကော ၁၅း၁- ၄ တွင် တင်ပြထားသည်။ သို့သော် ပေတရုက ဤအကြောင်းအ ရာတစ်ခုကိုမျှ နားမလည်။ ဤမိန့်ဆိုထားချက်များသည် “၀ှက်ထားသောအရာဖြစ်သည်။” ပေတရုက ဧဝံဂေလိတရားကို မယုံကြည်ခဲ့ပါ။
သင်သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့မရောက်လျှင် သင်သည် ပေတရုနှင့်အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ သင့်ကို အသင်းတော်သို့ “ခေါ်လာမည်” ဖြစ်သည်။ သင့်အား မိဘများ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ခေါ်လာလိမ့်မည်။ သင်သည် မွေးနေ့ပါတီပွဲသို့လာခဲ့သည်။ နေ့လည်စာ နှင့်ညနေစာကို တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအတူစားသောက်သည်။ ခရစ်တော်၏အသေသတ်ခြင်း၊ အသွေးတော်အကြောင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို ကျွနု်ပ်ထံကြားသိရသည်။ သို့ သော် သင်၏စိတ်နှလုံးသည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အကြောင်း ပြောသောအခါ လွင့်ကြွေသွားသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါကြားသိရသော်လည်း လက်မခံပါ။ မှန်ကန် သည့်သဘော သို့မဟုတ် ထုိ အရေးကြီးသည့်သဘောတော့မတွေ့ရပါ။ မည်သို့သော အတွေး မျိုးကို တွေးနေသည်ဖြစ်ပါစေ၊ ထိုအရာများ အဘယ့်ကြောင့် အရေးကြီးသည်ဟူသောအချက် သည် ရှင်းလင်းမှုမရှိပါ။ သင်သည် ပေတရုက မိမိအပြစ်ကို မသိမြင်မှီအချိန်က အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
“သူတို့သည် လူသားကို ရုတ်ပုတ်၍ သတ်ကြလိမ့်မည်။ သုံးရက် မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုစကား တော်တစ်ခွန်းကိုမျှ တပည့်တော်တို့သည် နားမလည်ကြ။ ထိုအ ကြောင်းအရာသည် ၀ှက်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ မိန့်တော်မူချက် အနက်ကို မရိပ်မိကြ။” ( (လုကာ ၁၈း ၃၃-၃၄ ))
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး လုကာ ၂၂း ၃၁ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ Scofield Study Bible ၏ စာမျက်နှာ ၁၁၀၈ ကို ဖတ်ကြပါစို့။
“တဖန်သခင်ဘုရားက၊ ရှိမုန်၊ ရှိမုန် ဂျုံဆန်ကို ဆန်ခါနှင့်ချသကဲ့သို့ စာတန်သည် သင်တို့ကို ချရမည်အကြောင်း အခွင့်တောင်းသည် ဖြစ်၍၊ သင်၏ယုံကြည်သောစိတ်မပျက်စေခြင်းငှါ ငါသည် သင့်အ ဖို့ဆုတောင်းလေပြီ။ သင်သည် သတိရပြန်သောအခါ သင်၏ညီ အစ်ကိုတို့ကို တည်ကြည်စေလော့ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ပေတရု က၊ သခင်၊ အကျွနု်ပ်သည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ထောင်ထဲသို့၄င်း၊ အသေသတ်ခြင်းသို့၄င်း လိုက်ခြင်းငှါ အသင့်ရှိပါ၏ဟု လျှောက် လေသော်၊ သခင်ဘုရားက၊ ပေတရု၊ ငါဆိုသည်ကား၊ ယနေ့တွင် ကြက်မတွန်မှီ သင်သည် ငါ့ကို မသိဟု သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။” (လုကာ ၂၂း ၃၁- ၃၄) )
ကျွနု်ပ်က သမ္မာကျမး်စာနှင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင်ရှိသော ရှိမုန်ပေတရု ဟူသောခေါင်းစဉ် ဖြင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ရှုထားသည်။ (Baker Academic, ၂၀၁၂ ) ဒေါက်တာ Markus Bockmuehl ရေးသားသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျမ်းစာနှင့်ကနဦးခရစ်ယာန်လေ့လာ မှုအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီးသင်ကြားပေးသည့် အင်္ဂလန်နိူင်ငံရှိ အော့စ်ဖို့တက္ကသိုလ်တွင် နည်းပြဖြစ်သည်။ သူသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းကင်းဖြင့် ပေတရုသည် ယေရှုအသေခံမည့်ည အချိန်မတိုင်မှီ မပြောင်းလဲသေးပါဟုဆိုသည်။ သူသည် အမှန်တရားကို ပြောလိုက်သည်။ အ ခြားအနက်ဖွင့်ကျမ်းရေးသူများက ဤအကြောင်းကို ချန်လှစ်ထားကြသည်။ ဒေါက်တာ Bockmuehl က ထိုသို့မဟုတ်။ သူက ထိုအကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ရှင်းပြထားသည်။ နား ထောင်ကြပါစို့။
“တဖန်သခင်ဘုရားက၊ ရှိမုန်၊ ရှိမုန် ဂျုံဆန်ကို ဆန်ခါနှင့်ချသကဲ့သို့ စာတန်သည် သင်တို့ကို ချရမည်အကြောင်း အခွင့်တောင်းသည် ဖြစ်၍၊ သင်၏ယုံကြည်သောစိတ်မပျက်စေခြင်းငှါ ငါသည် သင့်အ ဖို့ဆုတောင်းလေပြီ။ သင်သည် သတိရပြန်သောအခါ သင်၏ညီ အစ်ကိုတို့ကို တည်ကြည်စေလော့ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်။” ( ( လုကာ ၂၂း ၃၁-၃၂ ) )
ဒေါက်တာ Bockmuehl က ဤသို့ဆိုသည်။
“ပေတရု စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းခံရာ စာတန်နှင့်ရုန်းကန်နေရသည့် ကိုးကားချက်ကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါသည်။ သင်သည် ပြောင်း လဲလာသောအခါ အလေးအနက်ရှိသည်ကို သိရသည်။ သို့သော် ဘာသာပြန်ဆိုသူများသည် ဂရိကားလုံးကို လုံးဝအထောက်အပံ့မ ပေးနိူင်ကြပါ။” (၄င်း၊ စာ-၁၅၆၊ ၁၅၇) )
ထို့ကြောင့် NIV, NASV, ESV နှင့်အခြားခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်များသည် မှားယွင်း လျက်ရှိကြသည်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူအများစုက ဂရိဘာသာကို အထောက်အကူမပြုနိူင်သည် ကို တွေ့ရသည်။ ဒေါက်တာ Bockmuehl က ဂရိစကားလုံး “epistrepho” သည် “ပြောင်းလဲ ခြင်း” ဟူ၍ ဘာသာပြန်ဆိုထားရမည်ဟု ဆက်လက်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် KJV သည် မှန်ကန်မှုရှိပြီး ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်များသည် ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဒေါက်တာ Bockmuehl က ဆက်လက်၍ ဤသို့ဆိုသည်။
“ပေတရုသည် မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာ၊ သို့မဟုတ် မည် ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲလာသနည်း။ ကျွနု်ပ်တို့ကြုံတွေ့ရသည့် ပြဿနာ ပင်ဖြစ်ပါသည်။သူလုပ်ဆောင်သောသာသနာလုပ်ငန်း၏ နောက် ဆုံးညတွင် ရှင်လုကာ၏ပြောဆိုချက်အရ ယေရှုသည် အနာဂတ် ပေတရု၏ပြောင်းလဲလာခြင်းအကြောင်းကို ပြောဆိုသည်။” ( (၄င်း၊ စာ- ၁၅၆ ) )
“လုကာ ၂၂း ၃၂ တွင် အနာဂတ်၌ ပေတရု၏ပြောင်းလဲလာမည်အ ကြောင်း ချထားလျက်ရှိသည်။” ( (၄င်း )
“သင်သည် ပြောင်းလဲလာသည့်အချိန်တွင် (အနာဂတ်)” (၄င်း၊ စာ- ၁၅၆) “ယေရှုသည် ပေတရု၏ပြောင်းလဲလာခြင်းကို အနာဂတ်တွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာကို မျှော်လင့်သကဲ့သို့ မျှော်လင့်သည်။” (၄င်း၊ စာ- ၁၅၈ )
သို့သော် ပေတရုသည် ပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ဟု အပြည့်အဝယုံကြည်ထားသည်။
“သခင်၊ အကျွနု်ပ်သည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ထောင်ထဲသို့၄င်း၊ အ သေသတ်ခြင်းသို့၄င်းလိုက်ခြင်းငှါ အဆင်သင့်ရှိပါ၏။” ( (လုကာ ၂၂း ၃၃ ) )
ယေရှုက “ပေတရု၊ ကြက်မတွန်မှီ သင်သည် ငါ့ကို သုံးကြိမ်တိုင်အောင် ငြင်းပယ်လိမ့်မည်” ဟု ဆိုလေသည်။ (လုကာ ၂၂း ၃၄) ပေတရုက မာနတ်ကိုကြံကြံ့ခံနိူင်ပြီး ပြောင်းလဲခြင်း (epistrepho) မရှိဘဲ ခရစ်တော်အတွက် ရပ်တည်ပေးနိူင်မည်ဟု ထင်ခဲ့မိသည်။ သူသည် အဘယ်မျှ မှားယွင်းပါသနည်း။ သင်သည် အဘယ်မျှလောက်မှားယွင်းပါသနည်း။
သူတို့သည် ယေရှုကို ဖမ်းဆီးပြီး ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏အိမ်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြလေ သည်။ “ပေတရုက နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။” ( လုကာ ၂၂း ၅၄ )ပေတရုသည် အပြင်ရှိ လူများအလယ်တွင် ထိုင်တော်မူခဲ့သည်။ လူငယ်ကောင်းမလေးက “သူသည်လည်း ယေရှုနှင့် အတူရှိခဲ့သည်”ဟုဆိုခဲ့သည်။ (လုကာ ၂၂း ၅၆ ) ပေတရုက “သူ့ကို မသိပါ” ဟုဆိုသည်။ ခဏကြာသောအခါ လူတစ်ဦးက ပေတရုသည် ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဖြစ် ကြောင်း ဆိုသည်။ ပေတရုကလည်း “အချင်းလူ၊ ကျွနု်ပ်မဟုတ်ပါ” ဟု ပြန်ဆိုလေသည်။ အခြားသောအချိန်တွင် တတိယလူက ပေတရုအား ညွှန်ပြပြီး “သူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ရှိခဲ့သည်” ဟုဆိုသည်။ ထိုအခါ ပေတရုက “အချင်းလူ၊ ငါသည် သင်ပြောသောသူကို မသိ” ဟု ဆိုလေသည်။ပေတရုသည် ထိုသို့ပြောနေစဉ် ကြက်သည် တွန်လေ၏။
ကျွနု်ပ်ဇနီးနှင့်ကျွနု်ပ်သည် ဤအရာဖြစ်ပျက်သည့်နေရာ ယေရုရှလင်သို့ သွားခဲ့ကြ သည်။ လမ်းပြက ယေရှုမတ်တပ်ရပ်သည့်နေရာနှင့်ပေတရုမတ်တပ်ရပ်သည့်နေရာကို ပြ သည်။ ယေရှုက ခေါင်းကိုလှည့်ပြီး ယေရှုကို ကြည့်တော်မူသည်။ ထို့နောက် ပေတရုက ယေရှု ၏မျက်နှာတော်ကို စေ့စေ့ကြည့်တော်မူသည်။
“ပေတရုသည် ထွက်သွား၍ ငိုကြွေးလေသည်။” ( (လုကာ ၂၂း ၆၂) )
နောက်ဆုံးတွင် ပေတရုသည် မိမိအပြစ်ကိုမြင်လာသည်။ သင်သည် ပေတရုကဲ့သို့ အပြစ်ကို သိမြင်ခြင်းမရှိသ၍ စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်လုံးဝရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၃။	တတိယအချက်၊ ပေတရုပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။
လုကာ၂၄း ၃၄ ကို ကျေးဇူးပြု၍ လှန်ကြည့်ပါစို့။ ထင်ရှားသည့် ကျမ်းပိုဒ်အလားဖြစ် သည်။ သို့သော် ဒေါက်တာ Bockmuehl က ပေတရုပြောင်းလဲသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ “ယေရှုသည် လှည်ကြည့်၍ မိမိအပြစ်ကိုသိမြင်ရန် ပေတရုအား ကြည့်ရှုတော်မူ သည်။(လုကာ ၂၂း ၆၁) ပေတရု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့အတွေ့အကြုံသည် (လုကာ ၂၄း ၃၄ ) မှောင်မိုက်ထဲက အလင်းသို့လှည့်ပြန်တော်မူသည်။” (Bockmuehl, စာ-၁၆၃ ) တမန် တော်ရှင်ပေါလုကလည်း ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံသည် ပေတရု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့အတွေ့အ ကြုံကို ကျွနု်ပ်တို့အား ပြောဆိုခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုက “ကေဖသည် (ပေတရု) သူ့ကို ကိုမြင်ပြီး တပည့်တော် ဆယ့်နှစ်ပါးတို့သည် မြင်ကြလေသည်” ဟုဆိုလေသည်။ ( ၁ ကော ၁၅း ၅ )
သမ္မာကျမ်းစာက ပေတရုအားခေါ်ခြင်း၊ နောက်ပြန်လဲခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်ချက်၊ နှင့်သတင်းကောင်းနှင့်ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဘုမသိဘမသိဖြစ်ရ ခြင်းအကြောင်းကို အဘယ့်ကြောင့် များစွာပြောဆိုသနည်း။ ပေတရု၏ ယေရှုအပေါ်ငြင်းပယ် ခြင်းနှင့် နားလည်သဘောပေါက်လာသည့်အခါငိုကြွေးခြင်းအကြောင်းကို အဘယ့်ကြောင့် တစ်ခန်းလုံးတွင် ဖော်ပြရပါသန့ည်း။ ထိုအကြောင်းအရာများပြီးဆုံးသောအခါ ပေတရုပြောင်း လဲလာသည့်အကြောင်း အနည်းငယ်မျှသာပြောဆိုလေသည်။ “သခင်ဘုရားသည် အမှန်တ ကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီး ရှိမုန် (ပေတရု) အားထင်ရှားလေသည်။” အဘယ့်ကြောင့် နည်း။ နောက်ပြန်လဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသိ၀င်လာခြင်းသည် စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းတွင် အရေးပါသောအချက်များဖြစ်ပါသည်။ သင်သွားခဲဖူးသောနေရာသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပြီး ပြစ် မှားသောအပြစ်အတွက် ခါးသီးသောပူဆွေးမှုကိုမဖြစ်စေလျှင် သင့်အတွက် မျှော်လင့်ချက်မရှိ ပေ။ ပေတရုကဲ့သို့ ခံစားချက်မျိုးမရှိလျှင် ဧဝံဂေလိတရားသည် သင့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိလာ မည်မဟုတ်ပါ။ အပြစ်ကြောင့် သေလုနီးပါးဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစား ပြီး အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုမခံမှီ ယေရှုအတွက် သင်၏လိုအပ်ချက် များကို သိရမည်။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လုကာ ၂၂း ၃၁- ၃၄
"ကျေးဇူးတော်၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအသံ"၊ (Philip Doddridge ၊ ၁၇၀၂-၁၇၅၁၊ ထပ်ဆိုကို သင်းအုပ်မှရေးစပ်သည်။)
“တဖန်သခင်ဘုရားက၊ ရှိမုန်၊ ရှိမုန် ဂျုံဆန်ကို ဆန်ခါနှင့်ချသကဲ့သို့ စာ တန်သည် သင်တို့ကို ချရမည်အကြောင်း အခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍၊ သင်၏ယုံကြည်သောစိတ်မပျက်စေခြင်းငှါ ငါသည် သင့်အဖို့ဆုတောင်း လေပြီ။ သင်သည် သတိရပြန်သောအခါ သင်၏ညီအစ်ကိုတို့ကို တည် ကြည်စေလော့ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်။” ( ( လုကာ ၂၂း ၃၁-၃၂ ) )
(မဿဲ ၄း ၁၉၊ ၁၆း ၁၆၊ ၁၇၊ လုကာ ၄း ၄၁၊ ဧဖက် ၂း ၁၊ ၅)
၁။	ပထမအချက်၊ ပေတရုခေါ်ခြင်းခံရသည်။ မဿဲ ၄း ၁၈- ၂၀၊ ဆာလံ ၁၁၀း၃၊ မဿဲ ၂၀း ၁၆၊ ၂၂း ၁၄။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ပေတရုအပြစ်ကိုမြင်လာသည်။ မဿဲ ၁၆း ၁၆၊ ၁၇၊ လုကာ ၁၈း၃၁-၃၄၊ လုကာ ၂၂း၃၁- ၃၄၊ ၅၄၊ ၅၆၊ ၆၂။
၃။	တတိယအချက်၊ ပေတရုပြောင်းလဲသည်။ လုကာ ၂၄း ၃၄၊ ၁ကော ၁၅း ၅။